Ezona zixhobo ze-alarm zisimahla zemvula ze-Android | Izikhokelo ze-Android
Ezona zilungileyo ze-alamu zemvula zasimahla ze-Android
U-Emilio Garcia | 30/09/2019 15:22 | IiApple zeApple
Zininzi iindlela zokwazi iimeko zemozulu yendawo kunye nokwazi uqikelelo lwemozulu oluya kuba nalo kwiiyure ezimbalwa ezizayo, ezinje ngamajelo kamabonwakude, izicelo kunye nezalathiso zikarhulumente.
Nangona kunjalo, kweli candelo kuhlala kukhethwa yiba nealam yemvula kwisixhobo sakho esiphathwayo, kuba yeyona ndlela ikhawulezayo kwaye ilula yokwaziswa, kwaye nangona uGoogle Play eneentlobo ngeentlobo zeapps, zezona zilungileyo:
1 Imozulu yanamhlanje-Uqikelelo kunye neRadar
2 Imozulu kunye neRadar ebukhoma - Uqikelelo lwemozulu
3 Imozulu yeHlabathi: Imozulu yendawo kunye nemvula radar
4 Imozulu kunye neRadar: Imozulu yeentsuku ezili-14 kunye nobushushu
5 Iialarm zemozulu zobuqu
7 Imozulu kunye newijethi- iWeawow
8 Isimo sezulu
9 I-AccuWeather-Imozulu yemihla ngemihla, amaqondo obushushu kunye neMozulu
10 Iradar yemozulu
11 IMVULA RADAR- imozulu yoopopayi kunye noqikelelo
Imozulu yanamhlanje-Uqikelelo kunye neRadar
Imozulu yanamhlanje - Uqikelelo lwemozulu, iRadar kunye noLumkiso oluqatha
Sisicelo esisebenza njenge-alamu yemvula, kuba inika izilumkiso kwiselfowuni ngaphambili nabuphi na ubukho uxinzelelo oluphantsi kwindawo okhoyo.
Ngokukwanjalo, ivumela ukwazi uqikelelo lwemozulu kwiintsuku ezizayo, kwaye ibonelela ngazo zonke iintlobo zolwazi olusebenzayo olufana nobushushu, isantya somoya kunye nolwalathiso, ukubonakala, ukufuma, indawo yombethe kunye noxinzelelo lomoya.
Nangona kunjalo, ikwabonakaliswa ngokulungelelanisa ngokugqibeleleyo ifowuni, kuba thaca izaziso rhoqo ngeyure, nangona oku kunokuqwalaselwa kwisoftware yenkqubo.
Ukongeza, ikuvumela ukuba wabelane ngolwazi olu kunye nabantu onxibelelana nabo, zombini uthungelwano lwasentlalweni, kunye nemiyalezo ebhaliweyo njengoko ucacisa eqongeni.
Imozulu kunye neRadar ebukhoma - Uqikelelo lwemozulu
Umthuthukisi: I-N Tech, iMozulu kunye neRadar
Njengoko igama layo libonisa, ubukhulu becala yenziwe yiradar yemozulu, ebonisa ngaphezulu kwe-15 iiwijethi ezahlukeneyo, ukuvumela ukwazi zonke iintlobo zolwazi ngaphandle kokuvula usetyenziso.
Ibonisa idatha kubumanzi, ubushushu, uhlobo lwemvula, uhlobo lokufuma olukhoyo kuloo ndawo, ulwalathiso lomoya kunye namaza, kunye nemisinga yangoku yaselwandle.
Kuqwalaselo lwayo ukhetho "Ukutshixa isikrini ngolwazi" apho ikunika yonke idatha yemozulu ngaphandle kokuvula iselfowuni yakho, kwaye ineenye iindlela "ibha yesaziso ngemozulu" ngokunjalo.
Ihlaziywa ngokuzenzekelayo, kwaye ikuvumela ukuba uqwalasele iiyunithi zomlinganiso kwezona sizithandayo. Ikwanika ukhetho lokuseka iindawo ezininzi ngaphakathi kosetyenziso kunye nokwazi idatha yazo ngaxeshanye.
Imozulu yeHlabathi: Imozulu yendawo kunye nemvula radar
Ihambelana nesinye sezixhobo ezichanekileyo zokwazi imozulu ebekiweyo yendawo, kunye nemozulu ngeentsuku ezithile njengoko unqwenela. Ukongeza, inikezela ngolwazi kwi Izigidi ezi-1 zeedolophu ehlabathini lonke.
Inikezela ngeradar yemvula, efaka isaziso xa indawo yoxinzelelo esezantsi isondela. Kwakhona, ivumela ukwazi idatha ebalulekileyo kubumanzi kunye nendawo yombethe.
Inika ukufikelela kwi Ngama-7000 e-webcams kwihlabathi liphela kwaye inesinye sezona zibikezelo zithembekileyo, esivumela ukuba sazi iimeko zemozulu ukuya kuthi ga kwiintsuku ezili-16 ezizayo.
Inika ithuba lokukhetha ukusetyenziswa kwayo, kunye nokongeza indawo ezahlukeneyo ozifunayo ukuze ikwazi ukuhambisa ingxelo yemihla ngemihla ngohlobo lokuhamba kwemozulu kwindawo leyo.
Imozulu kunye neRadar: Imozulu yeentsuku ezili-14 kunye nobushushu
Imozulu kunye neRadar: i-alamu yemvula, imozulu iintsuku ezili-14
Umthuthukisi: I-WetterOnline GmbH
Yialamu yemvula elungileyo kakhulu, kuba inenkqubo yokulandela umkhondo ngexesha elifanelekileyo kwimozulu eqatha kwaye qhoboshela uqikelelo lwemihla ngemihla enokuchazwa ngalo naluphi na usuku lweveki.
Ihlaziywa yonke imizuzu emi-5 ngolwazi oluchaphazelekayo lwendawo okuyo, njengobushushu bayo, nokuba kuya kubakho imvula okanye uhlobo lwesantya esiveliswa ngumoya.
Yongeza kwakhona umgca wexesha ingaqhutywa ukuya kwiintsuku ezili-14, ukwazi ukuba ixesha liya kuba njani ngalo mzuzu, kunye nokuvela kwayo kwixesha elifutshane (emini, umzekelo).
Ine-Widget ehambelana nayo, ekwaziyo ukuveza lonke ulwazi olukhankanyiweyo kwiscreen esikhulu sefowuni yakho.
Iialarm zemozulu zobuqu
Umthuthukisi: Isoftware yeVazquez
Isilumkiso semvula esenziwe ngokwezifiso njengoko sibonisa uqikelelo lwemozulu oluhlaziyiweyo, kananjalo uqikelelo lwexesha eliphakathi nelide malunga nemvula.
Ikuvumela ukuba uqwalasele uhlobo lwealam olifunayo, nokuba kungenxa yemvula, ubushushu, umoya, amafu, ikhephu, inkungu okanye uqhwithela. Ikwanazo neeyunithi ezahlukeneyo ezikhoyo kumlinganiso wesalathiso.
Inikeza ukhetho lwe ngokwezifiso imvelaphi yakho kuyo nantoni na oyifunayo, kunye nokuseta iWidget kwiscreen esikhulu. Ikwalawula ukusebenza ngeGPS yeselfowuni, nangona ungabonisa isixeko sakho ukuba ufuna ukucinywa eli nqaku.
Own Iindidi ezimbini izandi kwizazisoEzi zi "Alarm" okanye "Isaziso" kwaye ziyahluka ngokuxhomekeka kubunzulu nokuphindaphindwa abazokuzazisa.
Isixhobo esimangalisayo esingaphezulu kwe- Izihlalo ezili-1.000.000 XNUMX XNUMX ezikhoyo ngaphakathi kwesoftware yakho. Isebenza nge-radar eyakhelwe-ngaphakathi kwaye inikezela uqikelelo lweentsuku ezili-14 ezizayo.
Iyasebenza eMelika, eYurophu, e-Afrika nase-Australia ngokuthe ngqo, nangona ine "alarm yombane" ekwaziyo ukuyigubungela yonke imozulu yeplanethi. Ukongeza, ukuchaneka kwayo ngokweengcali ngama-98%.
Inika imephu yesathelayithi ehlaziywa rhoqo kwaye evumela ukwazi ikhava ekhoyo yelifu kwindawo, njalo njengemida ebekwe apho, kuyabanda, kushushu okanye kwenzeke.
Okokugqibela, icacisiwe njengenye indlela egqwesileyo kuba ine- "Splash Alert" esebenza kakuhle kakhulu kwaye inokwenziwa ngokuseto kwinkqubo.
Imozulu kunye newijethi- iWeawow
Umthuthukisi: usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Sesinye sezicelo ezimbalwa ezisebenza njenge alarm yemvula leyo ayibonisi naluphi na uhlobo lwentengiso nangona ukhululekile ngokupheleleyo. Nika uqikelelo oluchanekileyo nanini na ufuna.
Inokugubungela umhlaba wonke, kwaye useto lwayo lunokuseta ngaphezulu kweelwimi ezingama-50 ezahlukeneyo. Inika ulwazi malunga nokuphuma nokutshona kwelanga ngexesha elimiselwe kwangaphambili.
Umzekelo Iwijethi ezili-10 ezahlukeneyo ezinokwenziwa ngokwezifiso, ebonisa inkxaso ye-GPS, kunye nexesha, umhla, ixesha lendawo kwaye ihlaziywa ngokuzenzekelayo kunye nesicelo.
Kwakhona, ivumela ukwazi iingxelo zemihla ngemihla apho ibonisa konke ukuhamba kwemozulu ngexesha lokuphumla olichazayo, kunye nobushushu obuphezulu okanye ubuncinci kunye noxinzelelo njengoko uchazayo.
Umthuthukisi: BACHA Ithambile
Ihambelana ne-alamu yemvula ebekwe kakuhle, ebonisa i Uphononongo lwe-90/100 kuGoogle Play. Le yokugqibela inombulelo kukuchaneka kwedatha yayo yemozulu efikelela kuma-95% ethembekileyo.
Inamandla ngaphakathi kweqonga layo lokufunda ngokwasemoyeni kwamazwe aseYurophu, eMelika, eAsia, eOceania nakwinxalenye enkulu yeAfrika. Ngokunjalo, inika ingxelo epheleleyo yazo zonke iinkcukacha zemozulu.
Ukongeza, incamathisela ulwazi malunga nendawo yombethe kunye nolwalathiso lomoya, kunye nokufuma okuhambelana nokubonakala ukuze ukwazi Ixesha liya kubekwa njani kwezi yure zimbalwa zizayo.
Iwijethi yayo ichanekile kakhulu, kuba ibonelela ngemephu yemozulu yelizwe liphela kwaye incamathisela uhlengahlengiso kwimilinganiselo yeqondo lobushushu, uxinzelelo, imvula kunye nesantya somoya, ukulawula ukucacisa uhlobo lwenkqubo ofuna ukuyisebenzisa.
I-AccuWeather-Imozulu yemihla ngemihla, amaqondo obushushu kunye neMozulu
I-AccuWeather: Uqikelelo kunye noLumkiso lwemozulu
Luhlobo lwesicelo sezilumkiso zakwangoko zemozulu yendawo, ukuvumela yazi iindaba zomzuzu malunga nayo nayiphi na imvula enkulu ezayo okanye utshintsho olunamandla lobushushu.
Nangona kunjalo, ikwacacisa ubungakanani belanga, kunye nokwahlula ubushushu apho ikubonisa isixa sokugqibela sobushushu esibhalwe kwi-radar kunye nendlela esivakalelwa ngayo.
Ngokukwanjalo, unokusebenzisa i-forecaster yayo ekuvumela ukuba uyitshintshe Umda wexesha ukuya kwiintsuku ezili-15, nangona icacisa ukuhamba kwemozulu ngomzuzu ngomzuzu.
Okokugqibela, inemephu yoxinzelelo olugqwesileyo, enomxholo ochazwe kakuhle, ukuba uthanda ukhetho "lweSishwankathelo" apho ikubonisa imeko yemozulu yeeyure zokugqibela, mihla le okanye ngoku.
Umthuthukisi: Uqikelelo lwemozulu oluchanekileyo nemephu yemozulu yeRadar
Ngokungafaniyo nezixhobo zikhankanywe apha ngasentla, usetyenziso oluphambili lwesicelo kukwimephu yemozulu ethi ibonisa ulwazi lwangaphambili oko kwenzeka nakweyiphi na indawo.
Nangona kunjalo, ikwabonelela ngengxelo esebenzayo kakhulu yeyure nganye okanye iveki oyifunayo. Ngokufanayo, inikezela ngesiphepho tracker esibonisa iziko laso kunye nophuhliso.
Own enye yeeWijethi eziphuhliswe kakhulu kunye nemozulu engagqibekanga yendawo okuyo, kwaye inokuqwalaselwa ngokwesitayile, kunye nobungakanani enabo.
Inika ulwazi malunga nesalathiso esinokwenzeka sokuqikelelwa kwemozulu, kunye nohlobo lokutshintsha kwamaqondo okulindeleke kwiiyure ezimbalwa ezizayo.
IMVULA RADAR- imozulu yoopopayi kunye noqikelelo
IMVULA RADAR yemozulu kunye noqikelelo lwemozulu
Umthuthukisi: IMOZULU NGOKU
Iyaziwa njengotshintsho oluchanekileyo lwemvula, njengoko igxile ekufundeni idatha enje ngoxinzelelo lwe-barometric, ukufuma okunxulumene, ubushushu, iigust kunye nokuma kwelifu ukubonisa ukubakho kwemvula.
Inikezela ngohlaziyo kuqikelelo lweyure ukwandisa ukusebenza kwayo kwaye ivumela ukufikelela idatha evela kwisixhobo sakho sokubambisana esihlawulelweyo "Windy kunye neMvula Viewer”Kodwa ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, ibonisa ukuthembeka kwama-99%, kuba ulwazi lwayo lufunyenwe kwii-radars kunye neesathelayithi kwihlabathi liphela, zisebenza ngetekhnoloji ethelekisayo yokuthelekisa.
Okokugqibela, inesimo sezulu esidibeneyo esiyingozi, ngokunjalo Uqikelelo lweentsuku eziyi-10-14, Ukulawula ukubonelela ngolwazi lwemozulu kwisithuba osifunayo, isalathiso esinokwenzeka, uguquko lwemozulu kunye nolunye ulwazi olunomdla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » IiApple zeApple » Ezona zilungileyo ze-alamu zemvula zasimahla ze-Android
Eyona midlalo ilungileyo yemibuzo ye-Android